Dzokera ku macOS High Sierra kubva ku macOS Mojave | Ndinobva mac
Kana tave kuzopedzisa mwedzi weshanduro yekupedzisira ye macOS Mojave, tinowana vashandisi vari kuongorora mukana we dzokera kushanduro yapfuura yeiyo system, semuenzaniso, macOS Yakakwira Sierra.
Zvikonzero zvekuchinja uku zvinogona kuve zvakawanda. Inowanzoenderana nematambudziko neiyo yazvino vhezheni ye chikumbiro iyo iwe yaunoshandisa pane inodzokororwa hwaro, kana kune vamwe dambudziko nechero kubatana Hardware mhando. Peripherals izvo zvisati zvashandurwa kune yazvino vhezheni yemacOS iripo kana pasina chikonzero chiri pachena, dzokera kuHigh Sierra vhezheni sezvo iri vhezheni yakagadzikana.
Kudzokera kuiyo yapfuura vhezheni ye macOS High Sierra haina kuoma, asi zvinoda matanho akati wandei uye nguva yekuodha pasi software uye kuiisa. Kune izvi isu tinofanirwa kuita nhanho dzakasiyana.
Chekutanga pane zvese, tinya dhawunorodha macOS High Sierra software. Tinofanira kuenda kuMac App Store. Kana iwe ukatsvaga macOS High Sierra kubva kuMojave, haizoonekwe. Izvi zvinodaro nekuti Apple haipe iyo inoshanda sisitimu yakura kupfuura inoiswa ikozvino Asi inowanikwa, kana tikaenda kune zvatakatenga, mukati meMac App Store. Dzvanya kurodha pasi, kurudyi.
Iyi kurodha ichagara mu folda kunyorera kweMac yedu. Kuziva iyo faira iri nyore kwazvo, zita rayo nderekuti Isa macOS High Sierra.Nayo iyi faira, unogona kuishandisa ku: gadzira inosimudza MacOS Yakakwira Sierra bhutsu, isa iyo faira pane kuona kwekushandisa kubva kunoshanda masystem senge Kufanana.
Sezvo isiri faira rinobatika, hatigone kungoriisa. Mune ino kesi, isu tinogona kuvimba ne yapfuura vhezheni yeTime Machine backup, yatakaita neHigh Sierra yakaiswa. Sarudzo yekupedzisira ndeyekuchengetedza iyo faira ratakatora kune yekunze disk uye ita kucheneswa kwakachena. Iyi sarudzo inokurudzirwa mune nyaya yekutora nguva yakareba isina kuitwa, ndiko kuti, vhezheni pane vhezheni, kana isu tinoisa uye tinobvisa akawanda mafomu. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti iyo yakachena kuisirwa inobvisa zvese zvirimo zvemidziyo yedu, iwe sarudza sarudzo ipi yakanakira iwe zvaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Dzokera ku macOS High Sierra kubva ku macOS Mojave
Iyo High Sierra kana chero yapfuura sisitimu yekushandisa haioneke muchikamu chekutenga cheiyo mac chitoro.
Ndanga ndiri kushamisika kusingafadzi, mushure mekuyedza nekuona kuti Mojave ine zvipembenene zvakawanda zvine multimedia application, ndakafunga kudzika kuHigh Sierra iyo yaimboita zvishamiso, uye ikozvino handigone kurodha chifananidzo kuti chigadzire chakachena. Iyo inongotora 22 Mb inogadziriswa inozoitisa kumashure kurodha pasi uye yozoisa paMojave, uye handizvo zvandiri kuda. Apple inowedzera kushandisa marongero akafanana ne "vezvematongerwo enyika" vachisiya vashandisi vanobhadhara muhoro wavo ...
Pedro Rodriguez akadaro
Dzivisa kutenga IMAC RETINA 21,5 inch 4K 2017, inononoka asi chakanyanya kuipa ndechekuti hazvigoneke kuita kopi yekuchengetedza mafaera ari eAPFS mhando, pane yekunze hard drive chero iri uye kunyangwe Mac Capsule, Ndine Mac yakura ine High Sierra yakaiswa uye inoshanda sekiriniki kana ichienzaniswa neMojave, hongu kana iwe ukaedza kukwidziridzira kuCatalina uye usingaone zvaunoita, ndine hurombo kutenga uku
Pindura kuna pedro rodriguez
Iwe unonyatso kuziva zvaunogona kubaya mu USB C pane Macs?